सुधारत्नको ‘सिङ्गिङ स्टार’ सपना – Janaubhar
सुधारत्नको ‘सिङ्गिङ स्टार’ सपना
-[सुधारत्न, गायिका (प्रतिस्पर्धी ‘द सिङ्गिङ स्टार’)
कनीकुथी कखरा कण्ठ गर्ने बेलादेखि नै गीतको लयमा हराउन थालिसकेकी सुधारत्न जतिबेला स्कूलमा एक/दुई कलासका खुड्किला चढ्दै थिइन्, त्यो भन्दा छिटो गीतसंगीतका खुड्किलाहरुमा पाइला चाल्न थालिसकेकी थिइन् । हामी बाँचिरहेको यही समाजको क्रुर, निर्दयी र असमान अदालतले फैसला गरेको कथित तल्लो जातको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएर हुर्किएकी सुधारत्न अहिले नेपाली सुगम गीतसंगीतको क्षेत्रमा आफ्नो स्पष्ट पहिचान र अस्तित्वका लागि संघर्षरत छिन् ।
बुवा शोभाराम परियार र आमा सीता परियारको कोखबाट दाङको शान्तिनगर-३ पातेटाकुरामा जन्मिएकी सुधारत्न अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट सञ्चालित लोकपि्रय प्रतिस्पर्धात्मक सांगितिक कार्यक्रम ‘द सिङ्गिङ स्टार’मा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी छिन् । देशैभरिका १४ हजार बढी प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर टप ५ मा पर्न सफल उनले सबैको माया, सद्भाव र सहयोग पाएमा आफूमा सिङ्गिङ स्टार बन्ने सक्ने आँट, साहस र क्षमता भएको दावी गर्छिन् ।
आफू जन्मिए, हुर्किएको दाङलाई कहिल्यै बिर्सन नसक्ने भन्दै उनले सम्पूर्ण दङ्गाली तथा आम नेपाली दर्शकहरुलाई भोटिङ गरी सहयोग पुर्‍याइदिन पनि अनुरोध गरेकी छिन् । दोहरी, आधुनिक, फिल्मी तथा पप गीतका साथै माया पिरती र मिलन विछोडका मात्रै नभएर देशप्रेमले ओतप्रोत गीतहरुसमेत गाइसकेकी यिनै नवगायिका, द सिङ्गिङ स्टारकी प्रतिस्पर्धी सुधारत्नसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
तपाई ‘द सिङ्गिङ स्टार’को टप ५ सम्म आइपुग्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
नेपाल टेलिभिजनको लोकपि्रय प्रतिस्पर्धात्मक सांगितिक कार्यक्रम ‘द सिङ्गिङ स्टार’मा लामो प्रयास र अथक मेहनतका साथ देशैभरिका करिब १४ हजार प्रतिस्पर्धीहरुको बीचबाट म अहिले टप ५ मा पर्न सफल भएकी छु ।
यतिखेर म जति उत्साहित र उद्देलित छु, त्यत्तिकै चुनौतीका बीचमा खेलिरहेको महसुस गरिरहेकी छु । समग्रमा यस स्थानसम्म आउन पाउँदा छुट्टै खालको आनन्द, गर्व लाग्नुका साथै चुनौतीका सामू उभिएको महसुस भइरहेको छ ।
अझै ४ जनासग कडा प्रतिष्पर्धा गर्न बाकी नै छ कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
निश्चय नै, तपाईले भनेजस्तै देशैभरिका १४ हजार बढी प्रतिस्पर्धीहरुबाट मलगायत १० जना सेलेक्ट भएका थियौँ । त्यसपछि हामी भोटिङको माध्यामबाट छानिइरहेका छौँ । त्यसैले अझैँ फाइनलका लागि कडा प्रतिस्पर्धा बाँकी नै छ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी अन्य चारैजना साथीहरु पनि प्रफेक्ट नै हुनुहुन्छ । तैपनि तपाइहरु सबैको माया पाए भने र तपाइले भोट गरिदिनुभयो भने पक्कै पनि मैले सिङ्गिङ स्टारको उपाधि जित्नेछु भन्ने विश्वास लिएकी छु ।
तपाई कहिलेदेखि गायन क्षेत्रतिर लाग्नुभयो नि ?
गीत गाउने भनेपछि म सानैदेखि नै हुरुक्कै हुन्थेँ । सानो छँदा विद्यालयमा गीत गाउँथे । मलाई अलिअलि सम्झना छ- कक्षा २ मा पढ्दाखेरि गाउन शुरु गरेकी थिएँ । नियमित गायन क्षेत्रमा लागेको भने ३ वर्षजति भयो ।
पहिलोपटक रेकर्डिङ गराउनुभएको गीत ?
पहिलोपल्ट मैले दाङकै हुमबहादुर खड्काको लालीगुराँस फूल लोकदोहरी एल्बममा गीत रेकर्ड गराएको थिएँ । गीतचाहिँ ‘दङ्गाली नानी, आउँ बस सँगै जाउला बस्न सल्यानीको मूलपानी’ यस्तै शब्दको थियो ।
अहिलेसम्म कति गीतहरु गाउनुभयो नि ?
मैले अलि बढी त दोहरी गीतहरु नै गाएकी छु । २५ वटा दोहरी गीतमा स्वर दिएकी छु । त्यस्तै १ दर्जनजति आधुनिक, फिल्मी र पप गीतहरु पनि गाइसकेकी छु ।
गायन क्षेत्रतिर लाग्नमा तपाईलाई के ले आकषिर्त गर्‍यो ?
मैले पहिले पनि भनेँ कि म सानैदेखि गीतसंगीतमा अत्यन्तै रुचि राख्थे । रेडियोमा गीतहरु बजेको सुन्दा लाग्थ्यो- मैले पनि यस्तै गीत गाउन पाए । सानैमा पलाएको त्यही चाहनाले मलाई अलि ठूलो भएपछि गायन क्षेत्रमा मैले पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने लाग्यो । र, यतातिर आकषिर्त भएकी हुँ ।
गायन क्षेत्रमा लाग्न कसबाट प्रेरणा पाउनुभयो ?
विशेषतः म गायन क्षेत्रबाट यहाँसम्म आइपुग्नुमा धेरैको सहयोग, सद्भाव र न्यानो मायाकै कारणले हो । मेरो आमाबुवा- जसले मलाई जन्माउनुभयो, हुर्काउनु भयो र शिक्षा दिक्षाका साथै न्यानो माया दिएर मलाई जीउन सिकाउनुभयो, उहाँहरुको न्यानो माया, ममता र स्नेह नपाएको भए म अहिले यो अवस्थामा हुने थिइँन सायद । अनि मेरा विद्यालयका शिक्षक गुरु वर्गहरु- जसले सधैँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा भाग लिन लगाउनुहुन्थ्यो, गीत गाउन कर गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरु मेरो आदर्श हुनुहुन्छ । साथै आदरणीय अंकल दधिराम सुवेदीबाट पनि मैले निकै माया र प्रेरणा पाएँ ।
अँ, यसका साथै मलाई अगाडि बढ्न हौसला दिनुहुने थुप्रै अग्रज कलाकारहरु, आफन्तजनहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबैको नाम यतिबेला लिन नसकूँला तर, उहाँहरुप्रति मेरो अगाध श्रद्धा छ, सम्मान छ ।
गीत संगीतका बारेमा कुनै प्रशिक्षण लिनुभएको छ ?
मैले दाङकै पशुपति संगीत विद्यालयबाट शास्त्रीय संगीतको आधारभूत ज्ञान लिएकी थिएँ । अहिले काठमाण्डौँको श्रीसंगीत पाठशालामा शास्त्रीय संगीतको दोस्रो वर्षमा पढ्दैछु ।
आफूले गाएको सबैभन्दा मनपर्ने गीत ?
मैले पछिल्लोपल्ट गाएको हरि विष्टको एल्वममा रहेको ‘मिलनमा हुँदो रहेछ जीवन प्यारो’ बोलको गीत मलाई सबैभन्दा बढी मन परेको छ । यो गीत अब छिट्टै बजारमा आउँदैछ ।
र, अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
म नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुदाई दिदीबहिनी र साथीहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु- मलाई यो स्थानसम्म पुर्‍याउनु भएकोमा । अझैँ पनि तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक चरण बाँकी रहेको हुँदा तपाइले मलाई माया गरेर एक भोटमात्र दिनुभयो भने पनि त्यसले मेरो विजयलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ, मैले सांगितिक क्षेत्रमा केही नयाँ गर्ने सपना सजाएकी छु, त्यसलाई पूरा गर्न तपाइहरुको सहयोग, हौसला र अमूल्य भोटका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु । मलाई भोट गर्न मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई Star टाइप गरी एक स्पेस छोडेर i लेखी 5001 मा पठाइदिनुहोला । अहिलेलाई यत्ति भनूँ ।
Prevगण्डक अभियानको संक्षिप्त शब्दचित्र
Nextशान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे एकीकृत नेकपा (माओवादी)को प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धता